12 Iindwendwe Vala Cliffs Moher Burren,Ennis, Lahinch
Ifama sinombuki zindwendwe onguDes
Izindlu zasefama zemveli kunye nezakhiwo zasefama ezithe zaguqulwa zanikezela 'indawo eyodwa' equka isithethe kunye nomtsalane wexesha elidlulileyo kunye nezixhobo zanamhlanje kunye nesimbo. Beka ngaphakathi kwefama yeehektare ezingama-20 ejonge iBurren National Park kunye neLake Atedaun. Indawo yokuhlala e-SPACIOUS yimizuzu emi-5 yelali yaseCorofin kunye nemizuzu eli-15 ukusuka kwidolophu yase-Ennis. Indlela yaseWild Atlantic, iCliffs yaseMoher, iDoolin, iLahinch kunye nezinye izinto ezinomtsalane zihamba ngemizuzu engama-20/30.
Iipropathi zivalelwe kwaye zibonelela ngesithuba phakathi kwendawo yokuhlala nangaphandle kodwa zikumgama omfutshane weendawo ezininzi ezinomtsalane zalapha ngemoto. Bayakonwabela iimbono ezibalaseleyo zeBurren, iLake Atedaun kunye nelali yaseCorofin.
IiCliffs zikaMoher yimizuzu engama-35, i-Ennis imizuzu eli-14, iGalway imizuzu engama-55, iBunratty Castle imizuzu engama-33, iLahinch Beach imizuzu engama-26 kunye nezinye izinto ezinomtsalane zasekhaya.
Ilali yaseCorofin idume ngoMculo wayo wesiNtu kwaye ibonelela ngoluhlu oluhle lweevenkile, iposi, ikhemesti kunye neendawo zokutyela.
Umbuki zindwendwe ngu- Des